N'ihi na ọtụtụ n'ime anyị, anyị na ndetu kọntaktị bụ ụfọdụ n'ime akụkụ kasị mkpa nke anyị iPhones na anyị na-eche ọtụtụ ihe akwado ha ka ha na-echetara anyị ndị anyị hụrụ n'anya, ndị enyi na ibe onye dị nnọọ iche. N'ihi nke a, iPhones na-ọma mara ha kọntaktị management usoro dị ka iTunes ndabere kọntaktị na ndabara. N'ime oge ahụ, adreesị akwụkwọ ego n'anya mejuo na kọntaktị i agaghịkwa mkpa ka a larịị ebe iPhone apụghị jide ọzọ, nke utịp ke a mkpa ka ihichapụ ụfọdụ n'ime ndị a na kọntaktsị. Ihichapụ ụfọdụ n'ime ndị a na kọntaktị ka ọ dịkwuo mfe ịchọta kọntaktị ị chọrọ. Isiokwu a na-akọwa ụfọdụ ihe ndị kasị nkịtị ụzọ maka ihichapụ iPhone kọntaktị.
Ò nwetụla mgbe ị na-eche otú i nwere ike ọcha gị iPhone ma tufuo enweghị isi kọntaktị? Lee ndị abụọ free ụzọ na ị nwere ike mfe iji ọcha kọntaktị gị.
Usoro otu - iji kọntaktị gị ngwa
Nke a bụ nke mbụ na mfe ụzọ ka ihichapụ kọntaktị otu otu. Nanị na-eso ndị na-esonụ:
Mepee Kpọtụrụ ngwa na gị iPhone n'ụlọ ihuenyo.
Chọpụta kọntaktị ị chọrọ ka ihichapụ. ị pụrụ nanị pịnyere aha na n'elu nke ihuenyo maka mbụ nchọgharị.
Enweta kọntaktị na-emeghe nkọwa.
Enweta edit na elu nri akuku nke na kọntaktị nkọwa.
Pịgharịa gaa na ala na ala nke na kọntaktị ezu ma enweta na Nhichapụ kọntaktị nkwenye.
Usoro abụọ - iji adreesị gị akwụkwọ na iTunes
Alternatively, ị nwere ike họrọ ihichapụ kọntaktị site n'iji adreesị gị akwụkwọ. Ndị na-esonụ ga-agbasoriri:
Emeghe gị adreesị akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị na-syncing na kọntaktsị na PC ma ọ bụ Mac, i nwere ike inwe ha na adreesị akwụkwọ na kọmputa.
Họrọ kọntaktị ị chọrọ ka ihichapụ.
Ọ bụrụ na ị na-eji Mac, na adreesị akwụkwọ pịa "Dezie" menu na mgbe ahụ kụrụ "Hichapụ kaadị" na a PC click "Action" ke kọntaktị na ndepụta, mgbe ahụ, "NchNhr" na mgbe "Hichapụ Kpọtụrụ" dị ka e gosiri n'okpuru.
Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa, na-emeghe iTunes na họrọ ngwaọrụ gị na n'elu aka nri nke iTunes window.
Pịa na Ama bọtịnụ na n'elu nke iTunes window,-enyere "mmekọrịta kọntaktị" na enweta "All kọntaktị" na ala. Pịa "Mee" ka mmekọrịta gị iPhone na iTunes na-ewepụ ndị kọntaktị i ehichapụ adreesị akwụkwọ.
Ihichapụ kpam kpam kọntaktị na Wondershare SafeEraser.
Mgbe ụfọdụ kọntaktị nwere ike-ehichapụ ma ka egosi na kọntaktị gị menu ka ị chọọ site na search iyo. Nke a nwere ike ịgụnye mwute ozi na ị chọrọ anọwo na-ehichapụ anya gara aga. Obibi dị otú ahụ nsogbu ojiji nke Wandershare SafeEraser na-ume.
Wondershare SafeEraser ewepu niile na-ehichapụ ozi, gị cache, nchọgharị akụkọ ihe mere, junk ngwa na faịlụ. Ka ihichapụ kọntaktị na-adịgide adịgide site n'iji Wondershare SafeEraser, na-esonụ usoro-agbaso:
Gbaa ndị SafeEraser na kọmputa gị mgbe ihe ịga nke ọma nwụnye.
Jikọọ gị iOS ngwaọrụ na kọmputa site na eriri USB.
Chere maka a mmapụta elu window egosi ngwaọrụ gị conntected ọma.
Method 1: Data Hichaa
Pịa '1-Pịa Hichaa' na isi window. Usoro ihe omume ga na-akpaghị aka na-amalite ịgụ isiokwu ngwaọrụ gị.
Ozugbo scanning usoro bụ zuru ezu, usoro ihe omume ga-egosipụta ngụkọta ego nke junk faịlụ. Pịa "Hichaa" ka onwe ohere.
Iji hụ na niile junk faịlụ na-kpamkpam kpochara, ngwaọrụ kwesịrị ịnọgide na ejikọrọ dum usoro.
Mgbe cleanup zuru ezu, usoro ihe omume ga-egosipụta ohere ọmụma na gị na ihuenyo dị ka ndị a.
Ị nwere ike ugbu pịa n'ụlọ na-aga azụ isi window ma ọ bụ pịa "Rescan" ikwugharị usoro.
Method 2: erasing ehichapụ faịlụ
Nke a na-adịgide adịgide deletes trashed faịlụ.
Ke akpan window, pịa "ihichapu ehichapụ faịlụ" na scanning usoro ga-butere. Usoro ihe omume ga-egosikwa ọganihu nke ndia achọpụtara.
Ihichapu faịlụ họrọ site na ịpị "ihichapu Ugbu a," I nwekwara ike họrọ faịlụ na ị chọrọ ehichapu site n'inyocha na igbe n'ihu ya.
Usoro ihe omume ga-ahụ-akpali gị pịnye okwu ahụ 'ihichapụ' iji gosi na-adịgide adịgide nhichapụ.
Ozugbo nhichapụ zuru ezu, usoro ihe omume ga-egosipụta "ọma ehichapu".
Wondershare SafeEraser bụ otu n'ime ihe ndị kasị tụkwasịrị obi ihicha ngwaọrụ. Ọ bụghị naanị na ọ na-akwado foto na vidiyo kamakwa erases oku na ndekọ, ozi ịntanetị, cache, olu mail, apple id, kalenda na kọntaktị. Download free ikpe mbipute inwale ya ugbu a.
3 ngwọta maka nwere ike ghara ihichapụ faịlụ njehie
> Resource> ihichapu> 3 Ụzọ iji Hichapụ gị iPhone Ndi ana-akpo